मोडलिङमा सुजल : जसले दुबै कान सुन्दिनन् र बोल्न सक्दिनन् (भिडियोसहित)
काठमाडौं । दुवै कान नसुन्ने र बोल्न नसकन्ने कलाकार सुजल बमले एक म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी छिन् । गीतकार डीआर उपाध्यायको पछिल्लो गीतको म्यूजिक भिडियोमा कलाकार बमले अभिनय गरेकी हुन् ।
यसै साता राजधानीमा एक भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी सार्वजनिक ‘झिमझिम परेली’ बोलको गीतमा संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठले संगीत गरेका छन् । यो भिडियो सार्वजनिक भएसँगै ‘बहिरा’ कलाकारले व्यवसायिक रुपमा अभिनय गरेको गीतको भिडियो विश्वमा नै पहिलो भएको भन्दै ‘एभरेष्ट वर्ल्ड रेकर्ड’ कलाकार सुजल बमलाई प्रदान गरियो । उनलाई एभरेष्ट वल्र्ड रेकर्डका मथुरा श्रेष्ठले रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए । गीत कविता सिवाकोटीले गाएकी हुन् ।
गीतको म्यूजिक भिडियो निर्देशन वसन्त सापकोटाले गरेका हुन् । म्यूजिक भिडियोमा माइकल चन्दको नृत्य निर्देशन, अर्जुन सापकोटाको छायाँकन, सिलोन लम्सालको सम्पादन रहेको छ । गीतको म्यूजिक भिडियोमा कलाकार बमलाई नारायण आचार्य ‘ह्याप्पी’ले अभिनयमा साथ दिएका छन् ।
नेपाली साङ्गीतिक तथा साहित्यिक क्षेत्रमा योगदान गरेको भन्दै गीतकार तथा उपन्यासकार डा. डीआर उपाध्यायलाई सम्मान गरिएको छ । मिलाप मासिकले डा. उपाध्यायलाई ‘मिलाप सम्मान’ प्रदान गरिएको हो । नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठ ‘रायन’, मिलापका प्रकाशक तथा सम्पादक कृष्ण भुसाल र कार्यकारी सम्पादक गीता अधिकारीले उपाध्यायलाई सम्मान पत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरे ।
<<< : आज विष्णु भगवानको उपासनासँगै हरिया वस्तुको प्रयोग शुभ
क्लासिक टेक : एक वर्षको सेवा खरिदमा दश महिना बोनस : >>>